14 Gamuchirai munhu asina kusimba+ pakutenda kwake, asi murege kuita zvisarudzo pamusoro pemibvunzo inomuka mumwoyo.+ 2 Mumwe munhu ane kutenda kunomubvumira kudya zvinhu zvose,+ asi munhu asina kusimba anodya miriwo. 3 Munhu anodya ngaarege kuzvidza asingadyi,+ uye munhu asingadyi ngaarege kutonga anodya, nokuti Mwari akamugamuchira. 4 Ndiwe ani kuti utonge mushandi womumba womumwe munhu?+ Iye anomira kana kuti anowa pamberi patenzi wake.+ Chokwadi, achamiswa, nokuti Jehovha anogona kumumisa.+ 5 Mumwe munhu anoti rimwe zuva rinopfuura rimwe;+ mumwe munhu anoti rimwe zuva rakafanana nemamwe ose;+ munhu mumwe nomumwe ngaave nechokwadi kwazvo mupfungwa dzake. 6 Uya anochengeta zuva anorichengeta nokuda kwaJehovha. Uyewo, uya anodya, anodya nokuda kwaJehovha,+ nokuti anoonga Mwari;+ uye uya asingadyi haadyi nokuda kwaJehovha,+ asi anoonga Mwari.+ 7 Chokwadi, hapana mumwe wedu, anozviraramira oga,+ uye hapana anozvifira oga; 8 nokuti kana tichirarama, tinoraramira Jehovha,+ uye kana tichifa, tinofira Jehovha.+ Naizvozvo kana tichirarama uye kana tichifa, tiri vaJehovha.+ 9 Nokuti Kristu akafa akavazve mupenyu nokuda kwaizvozvi,+ kuti ave Ishe pamusoro pavose vari vaviri, vakafa+ nevapenyu.+ 10 Asi iwe unotongerei hama yako?+ Kana kuti unozvidzireiwo hama yako? Nokuti tose tichamira pamberi pechigaro chokutonga+ chaMwari; 11 nokuti zvakanyorwa kuti: “‘Noupenyu hwangu,’ anodaro Jehovha,+ ‘mabvi ose achandipfugamira, uye rurimi rwose ruchabvuma Mwari pachena.’”+ 12 Saka mumwe nomumwe wedu achazvidavirira kuna Mwari.+ 13 Naizvozvo ngatichiregai kutongana,+ asi sarudzai izvi,+ kuti murege kuisa pamberi pehama+ chinhu chinogumbura+ kana chinokonzera kuti igumburwe. 14 Ndinoziva uye ndinotenda munaShe Jesu kuti hapana chinhu chakasviba icho sezvachiri;+ kunze kwokuti munhu akafunga kuti chimwe chinhu chakasviba, kwaari chinova chakasviba.+ 15 Nokuti kana hama yako ichishungurudzwa nokuda kwezvokudya, hausisirizve kufamba maererano norudo.+ Usaparadza uyo akafirwa naKristu+ nezvokudya zvako. 16 Naizvozvo, musaita kuti zvakanaka zvamunoita zvitaurwe nenzira yakaipa kwamuri. 17 Nokuti umambo hwaMwari+ hahurevi kudya nokunwa,+ asi hunoreva kururama+ norugare+ nomufaro+ nomudzimu mutsvene. 18 Nokuti uya anoshandira Kristu pane izvi anogamuchirika kuna Mwari uye anofarirwa nevanhu.+ 19 Naizvozvo, ngatiteverei zvinhu zvinoita kuti pave norugare+ uye zvinhu zvinovaka mumwe nomumwe.+ 20 Regai kuputsa basa raMwari nokuda kwezvokudya chete.+ Chokwadi, zvinhu zvose zvakachena, asi zvinokuvadza munhu anodya, pazvinenge zvichigumbura mumwe.+ 21 Zvakanaka kurega kudya nyama kana kunwa waini kana kuti kuita chimwe chinhu chinogumbura hama yako.+ 22 Kutenda kwauinako, iva nako maererano newe pachako pamberi paMwari.+ Anofara munhu asingazviisi pakutongwa nezvaanobvuma kuti zvakanaka. 23 Asi kana asina chokwadi nazvo, atopiwa mhosva kana akadya,+ nokuti haadyi nokuda kwokutenda. Chokwadi, zvinhu zvose zvisingabvi pakutenda chivi.+